Hutsika tsika dzinogona kupedza vaviri vacho | Bezzia
Maria Jose Roldan | 05/04/2021 22:00 | Hukama
Zvakajairika kuti mune vaviri vakasimbiswa uye vakagadziriswa munguva, nhevedzano yetsika dzisina kunaka dzakagadzirwa dzisina kunaka kune ramangwana rakanaka revaviri. Pakutanga, tsika idzi dzinogona kunge dzisingakoshe, zvisinei, zvinofanirwa kutaurwa kuti nekufamba kwenguva kubatana kwevanhu vakadaro kunogona kuputsa zvishoma nezvishoma.
Kana tsika dzakadai dzikasamiswa nenguva, zvinhu zvakakosha zvakadaro mukati mevaviri zvinogona kukuvadzwa sezvazviri pakuvimbwa kana kuremekedzwa. Saka kuti izvi zvisaitike, zvakakosha kuti uzive tsika idzi uye uzvipedze. Heano mimwe mienzaniso yetsika dzakaipa dzinogona kuitika muhukama.
2 Kuvapo kwekutsamwa
3 Kurwira pachena
4 Kusava nekubata kumeso
Kufananidza kunogara kuvenga uye iwe unofanirwa kudzivirira kuzvishandisa nguva dzose mukati mevaviri. Munhu wega wega ane zvavanokanganisa uye nehunhu saka hazvidi kuti uenzanise. Hazvikurudzirwe kana kuenzanisa kwakanaka seyakaipa.
Mukati mevaviri hamugoni kuve nehasha uye kana paine, zvakakosha kuti mutaure nevakaroora kuitira kugadzirisa zvinhu. Izvo hazvina kukodzera kukanganwira mumwe munhu kana zvisina kuitwa kubva pamoyo. Chigumbu chakavigwa hachina kugadziriswa, inogona kukura yakakura nekufamba kwenguva uye inokonzeresa matambudziko ehukama.
Kurwira pamberi pevasingazive ndeimwe yetsika idzo dzakaipa dzinofanirwa kudzivirirwa nguva dzese. Zvinetso zvakasiyana zvinofanirwa kugadziriswa mune zvakavanzika uye kwete pachena. Iyo tsika iri kuramba ichipararira mune vazhinji vevakaroorana vanhasi.
Kusava nekubata kumeso
Zvakajairika uye zvakajairika kuti mumakore ekutanga ehukama, vese vanhu vanogamuchira kurumbidza kubva kune vaviri vacho. Wese munhu anofarira kuti munhu waanoda anozvipira mamwe mazwi akanaka erudo uye kumwe kurumbidza. Nehurombo, sekufamba kwenguva, kurumbidza kwakadai kunodzikira uye vanhu vese vanogona kufunga nguva dzese kuti havasisina kukwezva kune vaviri ava.
Nyaya yegodo mukati mevaviri inyaya inonetsa. Kuva negodo pane dzimwe nguva chinhu chinogona kutorwa sechakanaka uye kusatombo kunetseka nezvacho. Nekudaro, kana iro godo rikaenda mberi uye richitungamira kuchinetso chakakomba zvakakwana, zvinogona kukanganisa hukama. Godo harimbofi rakava tsika yakaipa mukati mevaviri.
Muchidimbu, aya marudzi etsika haana kunaka kune vaviri. Nekufamba kwenguva, tsika dzakadai dzinogona kuparadza mumwe wako. Tsika dzinofanirwa kunge dziine hutano sezvazvinogona kuve nechokwadi chekuti chisungo pakati pevanhu vaviri chinosimba uye rudo runokunda chero mhando dambudziko. Iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuchengeta vaviri vacho uye nekuisa mhinduro kumatambudziko akasiyana angangomuka kubva kumatambudziko akasiyana anogona kubuda mukati mawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Hutsika hunhu hunogona kupedza vaviri vacho
Maitiro ekushongedza imba yekutandarira nemiti